Kolkata, n'etiti obodo kacha mma na India | Njem zuru oke
Kolkata, n'etiti obodo kacha mma na India
Calcutta, bụbu isi obodo Britain India, ka na-ejigide ụfọdụ ihe ochie ahụ mara mma, nke mere ka ọ bụrụ obodo dị iche na obodo ndị ọzọ buru ibu na mba ahụ. Ọbụna taa ọ bụ isi obodo steeti West Bengal dị mpako na obi ọdịnala nke India.
Ihe kachasị mma maka ileta Calcutta maka onye njem ọdịda anyanwụ bụ na ị ga-ahụ n'ime ya niile ezigbo ihe India, mana ị ga-ahụ ọtụtụ ihe ndị ọzọ. Ọ bụkwa na n’obodo a ebe ihe karịrị nde mmadụ ise bi, enwere ọtụtụ akụkọ ihe mere eme, nkà, omenala na ọchị.
Kolkata bụkwa obodo odi iche. N'ime ya, obí eze na okomoko villas na ụfọdụ nke ndị kasị daa ogbenye gburugburu ụwa, ebe ndị a ma ama Nne Teresa mepụtara ọrụ enyemaka mmadụ na-adịghị agwụ ike ruo ọtụtụ iri afọ.
Mana nke kachasị, Kolkata bụ ebe na-adọrọ mmasị nke na-ahapụ onye ọ bụla enweghị mmasị. Ndị a bụ nleta dị mkpa:
1 Shinlọ Dakshineswar
2 Akwa Bridge
3 Ncheta nke Maidan na Victoria
4 Mgbakọ Belur
5 Nleta ndị ọzọ dị mkpa na Calcutta
Otu n'ime ụlọ ndị kachasị mma ma dị egwu na mba ahụ. Na Shinlọ nsọ Dakshineswar raara nye chi nwanyị Kali, na-ejupụtakarị ndị na-efe ofufe na ndị njem nleta.
Lọ nsọ ahụ dị n’akụkụ osimiri hooghly. Ewubere ya na narị afọ nke iri na itoolu na ebumnuche nke ndị na-enyere ndị mmadụ aka Rani Rasmoni. Ihe owuwu ya na-adọrọ uche gaa na nnukwu ụlọ elu itoolu. Ugbua n'ime nnukwu ogige na-emepe ebe ndị kwesịrị ntụkwasị obi nwere ike ife ofufe ma bulie ekpere ha na nnukwu okwute mabụlị ọcha nke chi chi Hindu dị ka Shiva, Vishnu na, n'ezie, Kali.
N’akụkụ ụkwụ nke ụlọ nsọ ahụ ka ghat, nzọụkwụ ndị dị nsọ bụ́ ndị gbadara n'akụkụ osimiri.
Ọnụ ụzọ ụlọ nsọ Dakshineswar bụ n'efu, ma eleghị anya nke ahụ na-akọwa ihe kpatara ya ji jupụta na ndị mmadụ.
Maka ọtụtụ ndị, nke a bụ nnukwu akara ngosi obodo. Ọ bụ ezie na aha ọrụ ya bụ Rabindra Setu, onye obula no na Calcutta mara ya site na aha ndi bekee nyere ya: Howrah akwa. Emeghere ya na 1943 iji nye obodo ahụ ohere site na agbataobi obodo Howrah, nke ọ na - ewe aha ya.
Akwa Bridge na Kolkata
Ọdịdị a magburu onwe ya na-akwado okporo ụzọ buru ibu: ihe dị ka ụgbọala 150.000 na ihe karịrị ndị na-agafe ụkwụ 90.000 kwa ụbọchị. Akụkụ ya dị ka ndị a: mita 217 n’ogologo na mita 90 n’ịdị elu. N'abalị ọ na-enwu enwu na-enye ndị Calcuta ihe ngosi mara mma.
Ncheta nke Maidan na Victoria
Kacha mkpa ogige ke obio, mara n'oge colonial dị ka Ala Brigde Parade. Ọ bụ nnukwu esplanade nwere osisi na ahịhịa dị n'etiti Calcutta. Ọ bụ ebe kachasị mma iji gbanahụ ọgba aghara nke n'okporo ámá obodo, nke ndị njem nleta nwere ike ịbụ ntakịrị ihe.
Cricket Player ke Maidan ke Calcutta, ye Victoria Memorial ke edem
Tinyere ihe ndị ọzọ, na Maidan Park ị ga-ahụ ndị na-ewu ewu Ogige Ugbo Iden Eden na Calcutta ịgba ọsọ.
Ma n'elu ihe nile, n'otu njedebe nke ogige ahụ na-eguzo ebube ụlọ nke Victoria Ncheta, ihe ncheta ncheta nke a na-asọpụrụ Queen Victoria mgbe ọ nwụsịrị na 1901. Ihe dị n'ime ya nwere ụlọ ihe ngosi nka ebe a na-egosipụta ihe osise mmanụ na ndụ nke eze nwanyị ahụ.
Ọzọ kwesịrị ịhụ na Calcutta bụ ịrụ ụka adịghị ya ụlọ nsọ nke Mgbakọ Belur. Ọ bụghị naanị ụlọ nsọ ọ bụla, kama ọ bụ ụlọ pụrụ iche, ebe ọ bụ obi nke Ramakrishna Movement. Ihe kachasị dị ịtụnanya banyere ịhazi ụlọ ya bụ njikọta nke Christian, islam, Hindu na Buddha. Ọ bụkwa na ndị wuru ya chọrọ ka ụlọ nsọ a bụrụ akara nke ịdị n’otu nke okpukpe nile.
Templelọ eclectic nke Belur Math
Nleta ndị ọzọ dị mkpa na Calcutta
Ebe ndị mara mma iji hụ ma chọpụta na Kolkata enweghị njedebe. Ọ ka mma iji nwayọ ma rara ụbọchị ọ bụla ịnọ iji gụọ mpaghara dị iche na obodo ahụ. Ezigbo atụmatụ, dịka ọmụmaatụ, bụ ịchọ maka akara ndị ọchịchị Britain, nke anyị ga-ahụ n'ime ya Fort williamn'ime Katidral San Pablo na na neo-gothic ụlọ nke Courtlọikpe Kasị Elu.
Emikpu onwe gị na ufiop na yi ikuku nke obodo, ị ga-gaa na ahịa ifuru na Mullick Ghat na haggle na akwa na nka ụlọ ahịa nke Ahia ohuru. O kwesịkwara idobe Phears Lane na Old Chinatown (ochie Chinatown). Agbanyeghị, iji nwee ahụmịhe gastronomic XNUMX% Bengali ọ dị mkpa ịkwụsị na otu n'ime ụlọ nri ọdịnala dị na Ogige Ugbo.
Ndị ọzọ iru ala gara na-awa Ogige Botanical Calcutta, bụ́ ebe ahịhịa lili nke toro na nke anyị ga-ahụ osisi banyan na ya kemgbe ọtụtụ narị afọ. N'ebe ahụ ị ga-emesị chọta obere udo n'etiti ọtụtụ mmetụta.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Njem zuru oke » Kolkata, n'etiti obodo kacha mma na India
Akwa ọdọ mmiri na America